संसारलाई रुवाउने यो प्रेम काहानी, श्रीमान र आमालाई अन्तिम म्यासेज यस्तो छोड्दै यी युवती सधैका लागि अस्ताईन (भिडियो सहित)
Homeसमाचारसंसारलाई रुवाउने यो प्रेम काहानी, श्रीमान र आमालाई अन्तिम म्यासेज यस्तो छोड्दै यी युवती सधैका लागि अस्ताईन (भिडियो सहित)
March 3, 2021 admin समाचार 6154
भारतको गुजरातमा रहेको अह’मदाबादको नदीमा हा म फा’लेर ज्या’ न गुमाएकी आयशाको श्रीमानलाई प्रहरीले गिर’फ्तार गरेको छ । उनका श्रीमानलाई भारतको राजस्थानबाट गि ‘र फ् तार गरेको छ । आयशाले भिडियो बनाएर नदीमा हा’ म फा ल्नु अघि रेकर्ड गरिरहंदा उनको मुहारमा मु’स्कान थियो । उनी मुस्कुराई रहेकी थिईन् । उनले बनाएको उक्त भिडियो नै उनको जिन्दगीको अ’न्तिम भिडियो थियो । जो सोशल मिडियामा निकै नै भा’इरल पनि बन्यो ।
उनले चा’लेको उक्त कदमले धेरै मानिसहरुले उनको नी’जी जिन्दगीको बारेमा जान्ने इच्छा राखे । मानिसहरुले उनको श्रीमानको बारेमा जान्ने उत्सु’कता पनि देखाए । को हुन् त उनका श्रीमान ? के थियो कारण त्यस्तो कि आयशाले मु’स्कुराउँदै भिडियो बनाउनु पर्ने ? र भिडियो बनाएरै नदीमा हा’म फाल्नु पर्ने ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु जान्ने इच्छा सोशल मिडिया युजरसहरुले सोशल मि’डियामा नै देखाए । आयशाका श्रीमान आरिफ आफ्नो बुवा बाबू खानको साथमा जा’लौरको एक ग्रेनाइट फै’क्ट्रीमा काम गर्दा रहेछन् ।
उनले आफ्नो पुस्तैनी घरको बा’हीर दुई वटा दोकानलाई पनि भाडामा दिएका रहेछन् । आरिफ ग्रेनाइट फैक्ट्रीमा सुपर’भाइजरको पदमा रहेर काम गदर्थे । आयशालाई राजस्थानको जालौरसंग बाला’पनदेखि नै लगाव थियो । त्याहाँ उनको मामा घरपनि नजिकै थियो । त्यसै कारण पनि आयशालाई त्यो ठाउँसंग अ’साध्यै प्रेम र लगाव थियो । आयशाको मामाको भनाई अनुसार उनले आफ्नो श्रीमानलाई अ’त्ति नै धेरै माया गर्ने गर्थिन् । आयशालाई सानैबाट आईएएस बनने चा’हाना थियो । उनी पढाईमा पनि निकै ने जेहे’न्दार थिईन् ।
आयशाका ती सप’नाहरुलाई उनका श्रीमान आरिफले भने पुरा गर्न दिएनन् । यही विषयलाई लिएर आयश र उनको श्रीमानको बीच’मा झ गडा हुन शुरु गर्यो । त्यसै शिलशिलामा उनले आफ्नो श्रीमानको घर छाडेर आमा बुवा’को घरमा बस्ना थालिन् । त्याहाँ बस्दा उनका बुवा आमाले उनलाई उनको इच्छा अनुसार जा’गिर गर्न भनेपछि उनले जागीर पनि गर्न थालिन् । आयशाले निजी बैंकमा काम गर्न शुरु गरिन् । माईतमा बसेर काम ग’र्दापनि आयशलाई उनका श्रीमानले सताएको हुनाले उनले यस्तो कदम चालेको उनका माई’तीको भनाई छ ।
आयशाले नदीमा हा’ म फा ल्नु अघि आफ्नो श्रीमानलाई धेरै माया गर्ने बताएपनि वास्त’विकता भने त्यो थिएन । छोरीको जिन्दगीको वास्त’विकता बुझेका उनका आमाबुवाले भने आफ्नो छोरीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउनेलाई आफुहरुले कहिले पनि माफ नगर्ने बताएका छन् । बुवाआमाको भनाई अनुसार आयशालाई उनका श्रीमानले र घरका अन्य सदस्य’हरुले दाईजो नल्याएको भन्दै या ‘त ना दिने गरेका थिए । आयशालाई तीनदिनसम्म खाना खान नदिएको कुरा उनका आमाबुवाले प्रहरीलाई बताएका छन् । छोरीले यस्तो कदम चाल्नु’मा ज्वाई र अरु घरपरिवार जि’म्मेवार रहको बताएका छन् ।
प्रहरीले पाएको जानकारी अनुसार आयशाले नदीमा हाम फाल्नु अघि आफ्नो श्रीमानलाई फोन गरेर आफुले दे’हत्याग गर्न लागेको बताएकी थिईन् । आयशाले नदीमा हा ‘म फा ल्दैछिन् भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि आयशलाई ब’चाउन आएनन् उनका श्रीमान आरिफ । सबै कुरा थाहा पाएका श्रीमानले आयशालाई चाहेको भए बचा’उन सक्थे भन्दै प्रहरीले उनलाई गि ‘र फ्ता र गरेको छ । श्रीमानलाई खबर गरेको केही समयमा नै आयशाले भिडियो बनाएर नदीमा हाम फा’लेकी थिईन् । – इताजाखबर बाट
ऋण लागेर विदेश जान हिंडेका श्रीमानले, श्रीमतीको फेसबुक खोलेर हेर्दा देखें यस्तो, भैदिए भूमिगत (भिडियो सहित)
June 29, 2021 admin समाचार 7346
आइसियु नपाएर बुहारीको नि’धन भएपछि नारायणकाजीले आ:क्रोश पोख्दै भने, जनता ‘मा’रेर कसरी बस्‍न सकेको ना’लायक सरकार’ ?
May 13, 2021 admin समाचार 6604
आइसियु नपाएर बुहारीको दुखद नि’धन भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारसँग आ’क्रोशित बनेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा स्टा’टस लेख्दै आ’क्रोश पोखेका हुन् । कोरोना विरु’द्धको लडाइँमा सरकारले गैर’जिम्‍मेवार र नालायकीपन देखाएको महा’मारीको बेलामा
February 28, 2021 admin समाचार 6656